Izotope RX: Ahoana ny fomba hanesorana ny tabataba avy any am-peo avy ao am-peo | Martech Zone
Tsy misy zavatra mampahory kokoa noho ny mody an-trano avy amina hetsika iray, ny fametahana ny headphone studio anao, ary ny fahafantarana fa misy tabataba am-peo marobe ao anaty rakipeo. Izay fotsiny no nitranga tamiko. Nanao andiana rakipeo podcast tamina hetsika iray aho ary nisafidy microphone lavalier sy recorder Zoom H6.
Tsy nanana toerana natokana ho an'ny studio ho firaketana izahay, nipetraka teo ambony latabatra lavitra ny vahoaka fotsiny izahay… fa tsy nanampy mihitsy. Raha nanana ny mixer-ko sy ny mikrôfô studio aho dia azoko natao ny nanaraka ny any ambadika any fa ireny mics lavalier ireny dia naka ny feo kely rehetra! Torotoro aho.
Noho izany, nanao fanandramana vitsivitsy tamin'ny fitaovan'ny Audacity izahay hanalana ireo feo avy any aoriana, fa raha nanova ny toe-javatra kosa izahay dia nanomboka nanako ny feo. Nalefako tao amin'ny forum podcast tiako indrindra sy ilay namako mahatalanjona io olana io. Jen Eds atolotra avy hatrany Izotope RX6, fitaovana mitokana amin'ny fanamboarana ireo rakitra audio.
Raha tsy nisy fiofanana na nijery horonantsary Youtube aza dia navoakako tao amin'ilay fitaovana ilay rakipeo mahatsiravina, dia tsindrio Feo mitabataba, ary saika mandena ny patalohako rehefa mihaino ny tabataba any aoriana aho dia manjavona tsotra izao!
Raha heverinao fa mahavita an'ity aho… dia nandroso aho ary nizara sombin-valiny. Tena manaitra tokoa! Fanamarihana - Tsy nitantara an'ity tao amin'ny studio-ko aho, nampiasa mic desktop fotsiny tao Garageband aho… koa aza mitsara ahy.
Izotope RX6 Voice De-noise dia amidy amina $ 99 manomboka amin'ny $ 129. Ilaina izany ho an'ny podcaster rehetra mahita ny tenany fa sahirana amin'ny tabataba ao ambadik'izy ireo - manomboka amin'ny tsindry, hatramin'ny hums, hatramin'ny clipping, sns. Nampiasa ny maody adaptatera sy preset fotsiny aho, saingy afaka miasa amin'ny rakitrao toy ny hoe ao amin'ny Photoshop miaraka amina fitaovana maromaro namboarina ianao.
Mividy Izotope RX6 Voice De-tabataba
Tags: tabataba ao ambadikade-tabatabaizotopeizatope rxizatope rx6esory ny tabataba ao ambadikaesory ny tabataba